रानिबासमा कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्छ : डिलबहादुर रोकाय | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७८ चैत्र २१ गते ०४:३७
डिलबहादुर रोकाया, नेता – नेपाली कांग्रेस, सुर्खेत
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको स्थानीय सरकारले रानिबासमा जनआपेक्षा अनुसार विकास गरेको छ ?
जनताले आपेक्षा गरेअनुसारको परिणाम दिन नसके पनि केहि पनि विकास भएको छैन्, भनेर प्रचारप्रसार गर्नु गलत हुन्छ । जति नेतृत्वले रिजल्ट दिनुपर्ने थियोे, त्यति जनताले परिणाम प्राप्त नगरेता पनि रानिबासमा विकास चाहि नभएको भने होईन् । शिक्षा स्वास्थ्य सडक खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा राम्रो विकास भएको छ । खानेपानी टोल–टोलमा छ साना सिचाँई ट्याङी टोल टोलमा निर्माण भएका छन्। यतिमात्र पुग्दैन रानिबासलाई दिगो विकासको आवस्यकता छ।त्यो संभावना तबमात्र छ जब नेतृत्व सबल हुन्छ।नेपाली काङ्ग्रेस रानिबासले अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो खालको नेतृत्व खोजिरहेको छ।
गत निर्वाचनमा जनता माझ नेपाली कांग्रेस रानिबासले गरेका प्रतिबद्धताहरु साच्चिकै कार्यन्वयन भएका छन त ?
गत चुनाबमा कांग्रेसले गरेका प्रतिबद्धता र उम्मेदारले गरेका घोषणा पत्रमा के के प्रतिबद्धता थिए । त्यो त उम्मेद्वारले कति पूरा गरे गरेनन् रानिबासका जनतालाई प्रष्ट थाहा छ । जनताको पक्षमा राम्रो काम गरे जनताले जिताउछन ।
जनताबाट निर्वाचित नेतृत्वले जनआपेक्षा अनुसार किन विकास निर्माण गर्न किन सकेनन् ?
बिल्कुलै गरेनन् भन्ने चाहि होईन जति गर्नुपर्ने थियो जुन परिणाम जनतालाई दिनुपर्थ्यो त्यति परिणाम दिन नसकेको प्रष्ट यथार्थ हो ।
चिङ्गाडमा काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्छ कि एक्लै चुनावमा होमिन्छ ?
मेरो बिचारमा पार्टी जोगाउनका लागि पनि गठबन्धन गर्नु हुदैन् । चिङ्गाडमा नेपालीकांग्रेस एक्लै चुनावमा होमिन सक्ने ल्याकत राख्छ ।
अबको नेतृत्व कस्तो होस भन्ने नेपाली कांग्रेसको चाहाना हो ?
वडा अध्यक्षको नाममा भोटका लागि सत्तामा पुग्ने त्यसपछि ब्यक्तिगत स्वार्थमा रमाउनेहरुको अन्त्य होस र रानिबासको समग्र विकासमा परिणाम देखाउने नेतृत्व अबको आवस्यकता हो र त्यस्तो नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने हो । भाषण र कागजी सम्झौता गरेर सधै जनतालाई राजनीतिक भर्‍याङका रुपमा प्रयोग गरिरहने नेतृत्वको अन्त्य गरि सबल र अब्बल नेतृत्व कांग्रेसले चुनोस भन्ने हो ।
रानिबासमा नेपाली कांग्रेस वडाध्यक्षको उम्मेदवारीमा तपाईको पनि चाहना छ भन्ने चर्चा चलिरहेको छ कति सत्य हो ?
मेरो चाहना हुनु स्वभाविक नै हो । अहिले नै मैले घोषणा गर्न मिल्दैन । टिकट पार्टीले दिने हो ।अहिलेका रानिबासका जनताहरु छिटो परिणाम चाहान्छन । त्यो परिणाम अहिलेको युवा पुस्ताले सजिलै दिन सक्छन । मलाई लाग्छ यो मेरो मात्रै दावी भन्नु भन्दा पनि समय परिस्थितिको माग हो ।रानिबासका आम जनताको चाहाना हो । टिकट दिने कुरामा हाम्रो पार्टीले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिनेछ भन्नेमा म निकै आशावादी छु ।